စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ အီတလီနိုင်ငံကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ပြည်သူ့စိတ်ကူးစားစရာဘို့တိုင်းပြည်စုပြုံ, ယဉျကြေးမှု, နှင့်ကြွယ်ဝသောသမိုင်း. တကယ်တော့, သင်ပင်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ကျက်သရေကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ရန်မလိုပါ. A ကောင်းဆုံးသာဓက…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျတဖနျကတစ်နှစ်နီးပါးသောအခြိနျကာလကိုယုံကြည်နိုင်သလား? ဒါဟာဒီနှစ်အလှဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်! တကယ်ပဲဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များနှင့်အတူဝိညာဉျတျောသို့အရငျ! နှောင်းပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလကနေခရစ္စမတ်အကြိုသည်အထိ, အားလုံးဂျာမဏီကျော်မြို့ရင်ပြင် buzzing နေကြတယ်…
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏သူငယ်ချင်းများခုနှစ်တွင်ထူးဆန်းနယူးအစိတ်အပိုင်းများ Make ရန်ကဘယ်လို
အားဖြင့် Liam Cartwright
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခရီးသွားတစ်ဦးသိရှိနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှအချိန်ကိုလုပျတစျခုခုကိုဟုတ်မဟုတ်, သင့်ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့တစ်သက်တာခရီးစဉ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်, ခရီးသွားသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်သည်. Many people these days choose…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပတိုက်၏အပြည့်အဝကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်အတူကွဲပြားမှု. တကယ်တော့, အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာသွား, သင်ဖြစ်နိုင်အမြင်အကြွင်းအကျန်၏အတိတ်ယဉ်ကျေးမှု. တခါတလေ, ဤနေရာများကိုပျက် uninhabited. သို့သော်ငြားလည်း, ဤတည်နေရာများစမ်းသပ်မှုမှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောနေရာများရှိနိုင်ပါသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ကယ်ရထားသည်သင်သို့ဆောင်ခဲ့5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်! ဖို့ပိုရှိဘယ်လ်ဂျီယံထက်ဘီယာ. ဇာတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, လြှို့ဝှကျခပန်းပု, နှင့်မြို့ကမဟုတ်ကြသော်လည်းသင်တို့၏ရေဒါတွင်ဒါပေမယ့်လုံးဝသင့်! Belgium has no shortage…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သမုဒ္ဒရာ, မြစ်များ, နှင့်ရေကန်သာမဟုတ်အလှသဘာဝအံ့ဘွယ်သောကြသည်တန်ဖိုးရှိတဲ့အားလပ်ရက်ပတ်ပတ်လည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်5Save A Train ရထားလက်မှတ်၏အကူအညီဖြင့်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်ထက်ပိုသောဥရောပရှိအကောင်းဆုံးသဘာဝရေပူစမ်းများ….
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပတိုက်အပြည့်အဝတကြွယ်ဝသောသမိုင်း, ထူးခြားတဲ့ပုံပြင်များ, Adventures, တခါတရံနက်နဲသောအရာတခုကို. တိုက်ကြီးတိုင်းရှိရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံ mystifying တည်နေရာ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာထင်ရသောဥရောပတိုက်ရှိအချို့၏အများဆုံးအံ့သြဖွယ်နှင့်ထူးဆန်းသောနေရာများကိုကမ္ဘာ့. Mystery always has…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...